Trackums, casriga ah ee xayawaankaaga | Androidsis
Trackums, casriga ah ee xayawaankaaga
Haddii aad horeyba u maleyneysay inaad "wax walba ku aragtay" tiknoolajiyada, waan ka xunnahay inaan kuu sheegno inaadan arag. Adduunyada taleefannada casriga ahi way is beddelaan oo waxay ku socdaan xawaare jahannamo. Oo inkasta oo ay umuuqato mid adag hadana wali waxaa jira waxyaabo la allifsan karo. Iyo dabcan, annaga si aan u ogaano oo aan ugu sheegno asxaabta Androidsis.
Markan isbeddelka taleefannada casriga ah ayaa qaatay boodbood tartan ah. Haa, taleefan casri ah oo aan loogu talagalin aadanaha. Iyagu waa xayawaankeenna guriga, oo ay gacanta ku hayaan Trackums, oo noqon kara kuwa isticmaala aalad cusub. An "casriga" asalka ah oo ujeedkiisu yahay inuu nagu xiro eeygayaga ama bisadeena qaab aan horey loo arag.
Waad awoodi doontaa inaad taleefan u dirto bisaddaada, ma ka jawaabayaa?
Si isdaba joog ah sida ay ugu muuqato inay awood u leedahay inay soo wacdo xayawaankaaga, waxay aad ugu dhowdahay inay run noqoto. Shirkad bilow ah oo Mareykan ah ayaa dooratay in lagu hirgaliyo tikniyoolajiyadan qeyb dhaqaajisa malaayiin doolar sanadkii. Xaqiiqdii waan wada aragnay mid ka mid ah xayawaannadaas caanka ah oo leh silsilad luul. Maxaa loo diiday taleefanka casriga ah?
Trackums, waa sida tan casriga ah ee ugu horreeyay adduunka loogu talagalay xayawaanka loo baabtiisay. Aaladda yar ayaa la saari doonaa daboolka xayawaanka waxaana lagu qalabeyn doonaa hawlo kala duwan. Dhexdooda, mid baa taagan oo runtii waxtar yeelan doona. Goolasheynta waxay noqon kartaa lama huraan in la ogaado halka ay afar-geesoodyaashu yihiin haddii ay dhacdo in la waayo raadkooda.
Laakiin sidoo kale waxay dhexgalin laheyd waxqabadyo kale oo qayb ahaan xoogaa maad ah. Trackums ayaa leh shaashad yar oo LCD ah oo kuu oggolaaneysa inaad farriimaha farriinta shaqsiyadeed, magaca xayawaanka, cinwaanka, iwm. Maxaa intaa dheer waxaa ku jiri doona iftiin taas oo ka dhigi doonta mid muuqata habeenkii bisadda ama eyga ku socda aagga aragga hooseeyo.
Kamarada lagu soo daray in la arko waxa xayawaankeenu hortiisa ku haysto ayaa ugu yaraan xiise leh. Waxaan ku xirmi karnaa taleefanka gacanta ee casriga ah iyo kamaradda aaladda oo sidaas ayaan ku ogaan karnaa, tusaale ahaan, meesha ay ku taal guriga.
Iyo sida, Trackums waxay noo oggolaan doontaa inaan cod ugu yeerno eyga. Way u adeegi kartaa si xayawaanka, haddii la helo, kaliya uu u dareemo xoogaa inyar oo la socda. Sideed u aragtaa hindisahan?. Wuu guuleysan doonaa?. Qiimaha 120 euro waxaad ugala xiriiri kartaa si ka badan sidii hore xayawaankaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Trackums, casriga ah ee xayawaankaaga
Buug u qor LEAGOO KIICAA MIX oo hel qiimo dhimis xiiso leh marka lagu daro dhowr hadiyado
Kiniiniyada ugu fiican ee kayar 100 euro